Like in many places around the world, public gatherings have faced varying levels of restriction in Myanmar over the past two years. For Studer Trust, these rules specifically affected the Teacher Training Center (TTC) as they specifically applied to in-person meetings, training and boarding. As mentioned in previous newsletter articles [link], we quickly adapted to launch an Alumni Online Course (AOC) aimed at supporting the day-to-day instruction and the ongoing professional development of our teachers. Instead of the usual 70-day in-person training, We split the AOC into4sections, each consisting ofa4-week online course with4different topics, conducted via Facebook groups. After watching the video lessons, attendees participated in intensive individual and small group feedback sessions via phone and Facebook messenger video calls to guide creation and revision of assignments.
Studer Trust has seen many star attendees in our TTC programmes. One such example is Da May Tha Zin. May Tha Zin isateacher at Tharyar Gone Monastic School in Mon State. In the most recent Alumni Online Course (AOC 4), she was known asadiligent, active and enthusiastic participant. She often supplemented lessons with her own online research, and was comfortable asking her classmates and instructors for help when she did not understand something.
The journey to becomingateacher was not always straightforward for May Tha Zin. Although she wanted to attendaspecial Teaching College, she initially did not have the exam scores to enter. Instead she attended an arts and science university. However, after graduating from university, the monastic school from her village needed teachers and she got another chance to follow her passion. That was in 2014 and she has been teaching at Tharyar Gone Monastic School ever since.
Having now completed three Alumni Training Courses, May Tha Zin originally joined the Studer Trust TTC in search of help knowing how to deal with teaching students that brought complicated and challenging learning requirements. In the AOC 4, she learned new teaching methods and strategies to ensure all students understood the lesson. May Tha Zin particularly enjoyed developing learning tools and activities to make lessons engaging and fun. She feelsanew confidence in her ability to teach all types of students, and Studer Trust is excited and proud to watch her put these skills to use as soon as Tharyar School reopens.
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားသော နေရာများမှာကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း အများပြည်သူနေရာများတွင် စုဝေးခြင်းများအနေဖြင့် ကန့်သတ်မှုများကိုအား ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ Studer Trust အနေဖြင့် ဆရာ၊ဆရာမများအား မွမ်းမံသင်ကြားပေးသည့်စင်တာ (TTC) အဖို့ လူတွေ့အစည်းအဝေးများနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များ လုပ်ဆောင်ရာအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားတင်ပြခဲ့သလို ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်နေ့တာ သင်ကြားပို့ချမှုများအား အထောက်အပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျောင်းသားဟောင်းများအွန်လိုင်းသင်တန်း (AOC) ကို အခြေအနေနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေစွာ အလျင်အမြန် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ရက် (၇၀)ကြာ လူတွေ့ သင်တန်းပို့ချမှုအစား ကျောင်းသားဟောင်းများအွန်လိုင်းသင်တန်း (AOC) အား အပိုင်း(၄)ပိုင်းခွဲခြားပြီး အပိုင်း(၁)ပိုင်းစီတွင် မတူညီသော ခေါင်းစဉ်(၄)ခုဖြင့် ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်ကြာ Facebook Group မှတစ်ဆင့် သင်ကြားပို့ချပါသည်။ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများအား ကြည့်ရှုပြီးနောက် တက်ရောက်သူများက မိမိတို့ရေးဆွဲထားသည့်သင်ခန်းစာများအပေါ် တစ်ဦးချင်းနှင့် အုပ်စုငယ်အလိုက် သုံးသပ်ချက်ပေးခြင်းအစီအစဥ်ကို ဖုန်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး Facebook Messenger Video Call မှတစ်ဆင့် Assignment စီစစ်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖန်တီးခြင်းများအား ပြုလုပ်ကြပါသည်။
Studer Trust သည် TTC Program များတွင် ထွန်းတောက်လာမည့် သင်တန်းတက်ရောက်သူများအား တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ဥပမာအနေဖြင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် ထိူသူမှာ မမေသဇင် ဖြစ်ပါသည်။ မေသဇင်သည် မွန်ပြည်နယ်ရှိ သာယာကုန်းဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းမှ ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးခင်က ပြီးစီးခဲ့သည့် ကျောင်းသားဟောင်းများအွန်လိုင်းသင်တန်း (AOC 4) တွင် ဝီရိယရှိသူအဖြစ် ဂုဏ်သတင်းမွှေးပြီး သင်တန်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သူမကိုယ်တိုင် အွန်လိုင်းတွင် လေ့လာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများဖြင့် သင်ခန်းစာများအား ဖြည့်စွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအား နားမလည်ပါက နည်းပြဆရာများနှင့် အတန်းဖော်များအား အလွယ်တကူမေးစမ်းနိုင်သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
မေသဇင်၏ ကျောင်းဆရာမဖြစ်လာခဲ့သည့် ခရီးလမ်းက အမြဲတမ်း ဖြောင့်ဖြူးနေခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ သူမသည် အထူး ဆရာဖြစ်တက္ကသိုလ်အား တက်ရောက်ချင်ခဲ့သော်လည်း သူမ၏ စာမေးပွဲအမှတ်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါ။ ထို့အတွက် သူမသည် အနုပညာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက်တွင် သူမနေထိုင်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းမှာ ဆရာမများအလိုရှိသည့်အတွက် သူမအနေဖြင့် သူမ၏ စိတ်အားထက်သန်ရာအား ပြုလုပ်ရန် အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြန်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သူမသည် သာယာကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းတွင် စာသင်ကြားနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Studer Trust ၏ TTC Program မှ ကျောင်းသားဟောင်း မွမ်းမံသင်တန်း သုံးခုတက်ရောက် ပြီးနောက်တွင် မေသဇင်သည် စိန်ခေါ်မှုအပြည့်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော သင်ကြားမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် ကျောင်းသားများအား မည်ကဲ့သို့ ထိရောက်စွာ သင်ကြားရမည်ကို သိမြင်နားလည်ခဲ့ပါသည်။ AOC4Program တွင် သူမအနေဖြင့် ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာများအား အမှန်တကယ်နားလည်နိုင်မှုရှိ၊မရှိကို သေချာစေမည့် နည်းစနစ်များနှင့် စာသင်ကြားမှု နည်းလမ်းအသစ်များအား လေ့လာခဲ့ပါသည်။ မေသဇင်သည် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖန်တီးရသည်ကို ပျော်ရွှင်ပြီး သင်ခန်းစာများသင်ကြားရာတွင် ကျောင်းသားများ ပျော်ရွှင်စေရန်နှင့် စိတ်ဝင်စားလာစေရန် ဖျတ်လတ်တက်ကြွစေသည့် (သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်း) များဖြင့် စာသင်ကြားရသည်က သူမအတွက် ပျော်ရွှင်စေပါသည်။ သူမအနေဖြင့် ကျောင်းသား ပုံစံမရွေးဘဲ သူမ၏ စာသင်ကြားနိုင်မှု စွမ်းရည်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိသည်ကို ခံစားရလာရပြီး Studer Trust သည်လည်းပဲ သာယာကုန်းစာသင်ကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်နှင့် သူမ၏ စွမ်းရည်များအား အသုံးချမည်ကို တွေ့မြင်ရဖို့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိကာ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။